Izindaba - Ukuthunyelwa kusebenze kahle kuballdozer ngaphansi kweNational Petroleum Project yaseRussia
Ukuthunyelwa kwenziwe ngokushelela kwabasebenza ngogandaganda ngaphansi kweNational Petroleum Project yaseRussia
Septhemba — Ikota lekwindla liza, inkathi yokuvuna enezithelo ezicebile nephunga elimnandi! Ugandaganda ofaka ukusebenza kanzima kwabasebenzi be-HBXG boPhrojekthi waseRussia iPetroplem owawina i-HBXG uphinde wathunyelwa ngempumelelo emakethe ye-CIS futhi!
Lokhu ukuthengwa kwamathenda kwesibili kokuthunyelwa kwama-bulldozers ochungechunge lwe-TY165-3 enkampanini yasePetroleum yaseRussia. Inkampani yaseRussia Petroli yaneliseke kakhulu ngokusebenza okusebenzayo kweqoqwana lokuqala le-SWMC brand TY165-3 series bulldozers, ikakhulukazi amahle kakhulu ukusebenza okushisa okuphansi nokwethenjelwa okuhle kakhulu.
I-TY165-3 series bulldozer iyisakhiwo esivamile ngogandaganda esakhiwe yi-HBXG ngesisekelo sokusebenzisa izinzuzo zesakhiwo sogandaganda weCaterpillar's s D6D kanye nezinzuzo zokudlulisa zikaKomatsu's s D55 bulldozer. I-bulldozer isebenzisa i-gearbox ka-bulldozer kaKomatsu D85 " ngohlelo lokudlulisela amandla olukhulu nolunokwethenjelwa nolunokwethenjelwa nolunamandla.Uzimele we-chassis othuthukisiwe uthuthukisa ikhono lalo lonke umshini wokuzivumelanisa nezimo zokusebenza kanzima.
Kusukela kuqale lo nyaka, ubhadane lwe-COVID-19 selusabalele umhlaba wonke. Ngenkathi yenza umsebenzi omuhle ekuvikeleni nasekulawuleni ubhadane, i-HBXG inaka kakhulu ukuthuthukiswa kokuphathwa kwangaphakathi, isheshisa ukuthuthukiswa komkhiqizo nokulawulwa kwekhwalithi, igxile kwizikhalazo zamakhasimende, ithathe isinyathelo ngokushesha, ithuthukise izinga lenkonzo, futhi ithuthukise ukwaneliseka kwamakhasimende. Okwamanje, ivolumu yokuthengisa emakethe ibone ukukhula okuzinzile.
Isikhathi Iposi: Sep-04-2020